ကျုပ်အကြောင်း (နည်းနည်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျုပ်အကြောင်း (နည်းနည်း)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Aug 7, 2012 in Creative Writing, Poetry | 38 comments
ရမ်းပြီးတောင် သတ်ခဲ့တယ် …
မုဒိတာတွေက အသစ်အသစ် …….
ငါ မလှုပ်ပါဘူးကွယ် …
ပီတိတွေက အထပ်ထပ် …….
ပုဆိုးကိုလည်း ခပ်တိုတိုပါပဲ …
အဖော် လာညှိတဲ့ ကောင်ကိုလည်း
ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ခဲ့ရပါတယ် …
ထိုင်ဖို့ဆို ဝေလာဝေးဆဲပေါ့ ….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖွတ်ကျားမှန်း မသိ
လောကကြီးကို ရိခဲ့သေးရဲ့ …….
လူကို သင်ခန်းစာတွေလည်း ရစေခဲ့ပေါ့ ….
ဝေးရာမှာ xxxxxxxxxxxxx ။
By – တာတေလံ အံစာတုံး
ကိုယ်သာလျှင် အမိ ကိုယ်သာလျှင်အဖ
ကောင်းလိုက်တဲ့ Biography ။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝ ကျောင်းပြေးတဲ့ အရသာကို မသိရရှာဘဲကိုး ….ကျွတ်ကျွတ်.ကျွတ်..။
တားတားလေး အံချာတုံး တနွှားလိုက်တာဟယ် ……. ငယ်ရွယ်စဉ်ဘ၀မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက်တောင် မျက်စောင်းထိုးမကြည့်ရဲခဲ့တဲ့ဘ၀ဆိုတော့ မမလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်တိုင်း ဆိုင်ထဲထိုင်ငမ်းတဲ့သူထဲ မင်းမပါဘူးပေ့ါနော် ….. မမလည်း တားတားလိုပါပဲ … ရှက်လို့ ဆိုင်ထဲကိုမကြည့်ရဲခဲ့ဘူး ….
တကယ် ကျောတာလား… မဖစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ ကျောင်းပြေးတဲ့ဘ၀တော့ နည်းနည်းတော့ သိမှာပါနော်…
ခုချိန်ထိ မိဘတွေနဲ့က ဝေးနေတုန်းလား…
ကိုယ့်ဘ၀ ကိုပြန်ပီးအစုံအစိ မြင်လာမိသလိုလို (မနည်းဘူးဗျ)
သများတို့လဲ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဝေးရာမှာ အခုထိခြင်ကိုက်ခံရတုန်း (ခြင်ထောင်မထောင်ဘဲ အပျင်းထူမိတဲ့ညတွေဆို)။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တော့ မထိုင်တော့ဘူး (ဘီဘီဘဲသောက်တော့တယ်)။ တာတေလန်အောင်ဆိုးတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့အေ။ တော်ရုံတန်ရုံဆိုတော်ပေါ့။
အားပေးတွားပါ၏ တာတေလံ လေးရေ………..
ခြင်ကိုက်သိပ်မခံနဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်မယ်၊ အခုသွေးလွန်တုပ်ကွေးက အသက်အရွယ်မရွှေး ဖြစ်တာတဲ့ ခြောက်မျက်နှာရေ….ဟား…ဟား…ဟား…
ကျောင်းပြေးပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ စော်ကြောင်းရတဲ့ ဖီလ်လင် မောင်အံတယောက် မရခဲ့ရှာဘူးကိုး…
အခု နာမည်ကြီးနေတဲ့ အန်ဇာတုံးရဲ့ နှတ်ခမ်းမွှေးအကြောင်းလည်း မပါပါလား…:D
မနိုတောင် ကျောင်းပြေးပြီး သူများတောင်ယာထဲမှာ အသီးအရွက် လိုက်ခူးဖူးတယ် ဟီးဟီး
(ကျောင်းပြေးဒီနာမည်ဝိုင်းဝန်းပေးကျမယ် စအောင်မယ် ဒီနယ်မြေ စာသင်ကျောင်းတက်ရမယ် )ဟိဟိ မမကိုချစ်လို့နော် ချစ်သူဝေ သီချင်းလေးဆိုပြ တာပါ မမလည်းကျောင်းပြေးဖူးတယ်ပေါ့ စနိုးလည်းကျောင်းပြေးဖူးတယ် ဘယ်သူမှမသိအောင်ပြောပြတာနော်။
အဲ့လို စမဲ့သူကို မရှိဘူး တောင်ပေါ်မြီု့က
ရွာကျောင်းကလေးဆိုတော့ ဆရာက စပြီးပြေးတယ် :-)
မောင်သာ ကျောင်းပြေးတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ ၀တ္ထုရေးချင်ရင်
အိမ်ကို ကလိန်စေ့ ငြမ်းဆင်ခဲ့ပုံတွေ
ကိုရင်နဲ့ကျုပ် ခံစားချက် တူပါလိမ့်မယ်…
ဂေါ်မစွံ လူပြိုကြီး ချိုတာရဲ မပါဝူး…
အီးးးးးးးငယ်တုန်းက ညဆိုအိပ်ပျက်၊မနက်စောစောထ စာကျက်ရတယ်ထင်ပါ့။
ကျုပ်ကို တည့် တည့် ပြောလိုက်တာလား ဟင်င်င်
ကျောင်းမပြေးဘူးတဲ့ အဘ ဘဝဟာ ၊
အရသာ တစ်ခုခုလိုသွားတယ်ဆိုတာ အခုမှသတိပြုမိတော့တယ် ။
ဒီအရွယ်ကြီးမှ ဘာပြေးရင်ကောင်းမလဲ ။
ယနေ့အထိ ပျစ်မျိုးမှဲ့မထင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရှိနေကြောင်း
ချစ်ခြင်းမုဒိတာတွေ အတွက် ကဆုန်စိုင်းရန် အားယူနေကြောင်း
ဘယ်တံခါး ဖွင့်မလဲ လိုက်မျှော်နေသူ
အိန်း…ဗျာ…. ဘ၀အကြောင်းကို တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ အခုလို ရှင်းပြသွားတာ အနုပညာရသမြောက်လှသဗျ..။ဒါပေမဲ့ ကိုအံစာ အကြောင်းက နည်းနည်းပဲ သိခွင့်ရတာဆိုတော့ နောက်မျာမှာ ကျန်ဦးမလားလို့လေ..။ ဥပမာ ပါမစ်ရသွားတဲ့နောက်… နှလုံးကိစ္စလေးတွေ..အဆင်မပြေမှုတွေ..လူသဘာဝအကြောင်း တွေ စသဖြင့်ပေါ့..လေ…။ သိခွင်ရရင်ဖြင့် သိချင်မိတယ်။
နှာအသေ မထန် ကြံပါအုန်း
ရှာဖွေရန် အမှန်ဂပုံး (ဂ=ဂျီ)….
( မှတ်ချက်…. အံ့ကြီးကြီး သြသွားသံ )
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ ..
ခုလို ကျနော့်ရဲ့ မဖြစ်ညစ်ကျယ် ကဗျာလေးအား
လာရောက်ခါ အားပေးသွားကြပါကုန်သော …
ဖေဂျီးပေါက်၊ သကြားလုံးကြောင်၊ ကိုနွေဦး၊ မာမီခိုင်၊ မနော၊ ကိုမတ်၊ မရွှေအိ၊ ကိုရင့်ရောင်၊ ဦးညာ၊ မဝီလ်အာဝမ်း၊ မနိုဗွီ၊ သမီး အပျိုလေး၊ ကိုကမ်း၊ ပီချိုဂျီး၊ ရွာစားကျော်၊ ကိုနာဂ၊ ဦးဆာမိ၊ အဘဖော၊ ကိုရဲစည်၊ ကိုအာဂ၊ ရောင်းရင်းဂျီး၊ ကိုလင်းဆက် တို့အား ..
အထူးပင် ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း …
အားလုံးကို ချစ်တဲ့ ..
လင်ဗန်းဆီသုတ်ပြီး ခြင်ဖမ်းတာ ခုမှပဲကြားဖူးတော့တယ်။
မောင်မောင်အံ လင်ဗန်းကြီး ရမ်းနေတာ မြင်ယောင်ပြီး ……….
ဆေးလိပ်တွေ မီးခိုထွက်အောင် သောက်တာလည်းပါမယ် ထင်တယ် တီချယ်
ပြောသာပြောရ ခြင်ရိုက်ဘက်တံ တစ်ခါမှမသုံးဘူးသေးဘူး …
တို့ကတော့ ဂျစ်ပစီ မိုးတိမ် သီချင်းလိုပဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက
စာသင်ဖို့ ဆိုတာစိတ်တွေပျက် ဘီတဲလ်သီချင်းကျက်နေခဲ့ ကဗျာကျော်ကဗျာတွေဖတ်ပြီး အချစ်ကိုတွေ့ အိုးးး အသဲတတ်ပြီလေ…….. ဆိုတာလိုပဲ…။ ငယ်ငယ်ထဲက အော်ကြောလန်
ဆြာ … အံစာတုံး
မိဖ .. ရင်ခွင်
အံစာတုံးက မညစ်တတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ ..
ခင်တတ် မင်တတ် ဖော်ရွှေတတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
အဲ့ဂလို လင်ဗန်းဆီစွတ်ပြီး ခြင်ဖမ်းတာ
တော်တော်တော့ ဆိုးတဲ့ အလုပ်ပါပဲဗျာ …
အဲ့ဒုန်းကတော့ သိခဲ့ဘူးပေါ့ …
တီချယ်ကြီး ခင်ဗျာ ..
ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးကျေးပါဗျ ..
သနပ်ခါးဘဲကျားနဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်ဘဝကနေ
ခုတော့ ဒီဘဝပေါ့ ..
နောက်များမှာတော့ အဲ့ထက် အိုတဲ့ ဘဝဆီသို့ပေါ့ …
ချေးလိပ်ဒွေ သိပ်သောက်တော့ပါဘူးဂျ ..
တစ်ခါတစ်ရံ ဖစ်တွားပါဘီ …
ကောင်းဒါ နည်းဘာဒယ် …
အဲ့တုန်းက ခြင်ရိုက်ဘတ်သံတွေ မပေါ်သေးတော့
လင်ဗန်းကို ဆီစွတ်ပြီး ခြင်တွေကို သမခဲ့တာပေါ့ ..
ခုတော့ … လုပ်တော့ပါဘူးဂျာ …
ကာရန်မှာတော့ ဆရာ …
ခုလို လာအားပေးသွားတာ ကျေးကျေး ..
ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် လိုပေါ့ဗျ ..
မောင်ခင်မင် ခင်ဗျာ ..
ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော့ ..
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဓမ္မဒိဌာန်ကျကျ မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး။
ချီးကျူးပါတယ် တာတေလန် အဲ မဟာရာဇာ
ကဗျာလေးနဲ့ လိုတိုရှင်း ကျွန်တော့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းလေးကို အားပေးသွားပါတယ်။ [:)]
သနပ်ခါး ဘဲကြားလူးထားတဲ့ ပုံစံလေးကို ကြည့်ချင်သား။
တကယ်ဗျ အတည် ပြောချင်ပေမင့်
ကွယ် အိပ်တာ ကောင်းပါသကွယ်…………………….. :mrgreeen: